अब न गर्मीमा जस्ता तातेर बाफिनुपर्ने पीडा, न जाडोमा शीत चुहिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार पूर्वाधार/विकास अब न गर्मीमा जस्ता तातेर बाफिनुपर्ने पीडा, न जाडोमा शीत चुहिएर आत्तिनुपर्ने...
गोरखा । गोरखामा २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययरत कल्पना गुरुङलाई अचेल विद्यालय आउँदा बेग्लै खुशी मिल्छ ।
चार वर्ष त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनी कष्टकर समय गुजारेपछि अत्याधुनिक भवनमा पढ्न थालेकी छिन् गुरुङ । अब न गर्मीमा जस्ता तातेर बाफिनुपर्ने पीडा न जाडोमा शीत चुहिएर आत्तिनुपर्ने अवस्था ।
यस माविका ६ सय ३२ विद्यार्थी एक महिनाअघि अत्याधुनिक भवनमा सरेका छन् । कल्पना गुरुङजस्तै कक्षा १० कि सुनिता घले र कक्षा ९ का निर्देश बिसीका अनुहारबाट नयाँ भवनमा सर्न पाएको खुशी लुक्दैन ।
बैशााख १२ को भूकम्पले बारपाकका सबैजसो घरमात्र लडाएन् कल्पना गुरुङजस्तै सयौं विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय पनि क्षतिग्रस्त बनाइदियो । धन्न त्यो शनिबारको दिन थियो । विद्यालय लागेको समय हुन्थ्यो भने कल्पनाजस्ता कलिला विद्यार्थीहरुको अवस्था कस्तो हुँदो हो ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
तर, अब बारपाक बजारको प्रवेशद्धारबाट २ सय मिटरमा अवस्थित फराकिलो क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्निर्माण भएको छ र कलिला नानीहरु ढुक्कले पढन पाउनेछन् । ६ वटा अत्याधुनिक भवनहरुमा १६ वटा कक्षाकोठा छन् जहाँ शिशु कक्ष ‘इसिडी’ देखि कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ ।
त्यस अतिरिक्त नयाँ भवनमा विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रशासनिक कक्षमात्र छैनन् विद्यालयका कार्यक्रम गर्न सभाहल पनि छ । विद्यालय परिसरमा छात्र र छात्राका लागि अलगअलग शौचालय बनाइएको छ । विद्यालय संरचना अपांगमैत्री छ । विद्यालय परिसर वरिपरि तारजालीको बार लगाइएको छ । बगैंचा तथा कृषिसम्बन्धी प्रयोग गर्न आवश्यक बारीका लागि प्रशस्त ठाउँ छुट्याइएको छ ।
यी भवनहरु जापान सरकारको अफिसियल डेभलप्मेन्ट एसिस्टेन्सअन्तर्गतको सहुलियत ऋण सहयोगमा बनेका हुन् । सम्पूर्ण विद्यालय अवधारणामा बनेको यस विद्यालयको लागत ११ करोड छ । सोही अवधारणा अनुसार विद्यालयका लागि चाहिने बेञ्च, दराज उपलब्ध छन् भन् प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयका आधारभूत संरचना निर्माण भएका छन् ।
जेठको २३ गते विद्यालय परिसरमा एक भव्य कार्यक्रम आयोजना गरी विद्यालय संरचना स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको विशेष उपस्थिति थियो ।
त्यस्तै, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, जापान सहयोग नियोगका नेपाल प्रमुखलगायत पनि उपस्थित थिए । नवनिर्मित विद्यालय संरचनाबाट खुबै प्रभावित देखिनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले बारपाकीको जीविकोपार्जनको टेवा पु¥याउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले पर्यटनको संभावना बोकेको क्षेत्र भएकोले होमस्टे, मौलिक उत्पादनमूलक घरेलु उद्योग आदिमा लगानी गर्न सुझाव पनि दिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विद्यालयको भौतिक संरचना बनेकोले शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिन स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक तथा अभिभावकलाई आग्रह गरे। उनले विद्यालय स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिको स्वामित्वमा गएकोले यसको सही ढंगले संरक्षण गर्न पनि सुझाव दिए ।
विद्यालय स्थानीय तह हुँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण हुँदै गर्दा माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी सिमसिमे पानीमा छाता ओढेर कार्यक्रम हेर्दै र वक्ताहरुको भाषणा सुनिरहेका थिए । साना कक्षाका केटाकेटीहरु नयाँ भवनका प्यासेजहरुमा निस्फिक्री खेलिरहेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो मानौं उनीहरु बर्षौंदेखि खेल्न पाएका छैनन् ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा निजी आवासमा उल्लेख्य प्रगति भइसकेको छ । बारपाक सुलिकोट वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष रोशन कुमार विकका अनुसार यहाँका ९० प्रतिशत घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।
नयाँ स्वास्थ चौकी बनिसकेको छ भने विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणका काम अघि बढेको छ ।
समुद्री सतहभन्दा १९१५ मिटरको उँचाईमा रहेको बारपाकले भूकम्पबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्यो । तर, भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भएकाले देशकै ध्यान र लगानी पनि पाउन सफल भयो ।
यति विकट क्षेत्रमा ११ करोडको विद्यालय भवन बारपाकीका लागि ठूलो मौका पनि हो । अब भौतिक संरचनाजस्तै शिक्षाको गुणस्तरमा पनि मेहनत गरेर बारपाकीले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । सुविधासम्पन्न भवन त राम्रो शिक्षाका लागि साधन मात्र न हो ।
अघिल्लो लेखपूर्व शिक्षामन्त्री पौडेलको निधनपछि संसद् बैठक स्थगित, सदस्यहरुद्धारा शोक प्रस्ताव पारित !
अर्को लेखनेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलन शुरु
प्रदेश नं.१ मा थप ११ जनामा कोरोनाको पुष्टि
कोरोना परीक्षणका लागि थप १० ठाउँमा पीसीआर प्रयोगशाला
दोलखाको लामाबगरमा भूकम्प
कोरोना भाइरस जाँचमा पहिलो काठमाडौं, दोस्रो जुम्ला
गण्डकीमा प्रविधियुक्त सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने
पेरुमा ६ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, क्षतिकाे विवरण आउन बाँकी
कोरोनाविरुद्ध खोप तयार भएको जिकिर : परीक्षण माग